Gaa na mmemme na egwuregwu dị iche iche na Windows 7, 8. Ngwaọrụ Mebere
Ezi ehihie Oge na-aga n'ihu n'enweghị ihe ọhụụ na, n'oge na-adịghị anya, ụfọdụ mmemme, egwuregwu na-abawanye. Usoro nhazi nke ha na-arụ ọrụ na-edochikwa ndị ọhụrụ. Ma olee maka ndị chọrọ icheta oge ntorobịa ha, maọbụ ọ dị mkpa maka ọrụ iji nweta nke a ma ọ bụ usoro ahụ ma ọ bụ egwuregwu ahụ na-ajụ ịrụ ọrụ na Windows 8 ọhụrụ?
Esi lelee ọsọ ọsọ (HDD, SSD). Nnyocha ọsọ ọsọ
Ezi ụbọchị. Oge ọsọ nke kọmputa dum na-adabere na ọsọ nke diski! Na, ihe ijuanya, ọtụtụ ndị ọrụ na-eleda oge a anya ... Ma ọsọ nke loading Windows OS, ọsọ nke na-edegharị faịlụ na / site na diski, ọsọ nke mmemme amalite (ibu), wdg. - ihe nile dabere na ọsọ nke disk.
Na-arụpụta kọmputa mgbe ọ na-ejikọta / na-edegharị na draịvụ ike mpụga
Ezi ụbọchị. Anyi aghaghi ikweta na ndi mmadu na-acho uzo di iche iche, karia n'oge a, na-eto ngwa ngwa. Ọfọn, ntak-a? Akwa nchekwa nchekwa, dị nnọọ mma (ụdị si 500 GB na 2000 GB nwere ama ewu ewu), nwere ike jikọọ na PC dị iche iche, TV na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Kọmputa ndị mbụ ejiri chekwaa kaadị kaadi mkpanaka data, teepu tape, diskettes nke ụdị na nha. Mgbe ahụ, ọbịbịa nke afọ iri atọ ahụ nke otu ọkpụkpụ na-arụ ọrụ siri ike, nke a na-akpọ "draịva siri ike" ma ọ bụ HDD-draịva. Ma ugbu a, ụdị ọhụrụ nke nchekwa na-adịghị na-apụtaghị ìhè bụ nke na-apụta ngwa ngwa inweta nkwado.
Olee otú iji weghachite akụkụ ọjọọ na disk [usoro ọgwụgwọ HDAT2]
Ndewo Ọ dị mwute, ọ dịghị ihe na-adịgide adịgide na ndụ anyị, gụnyere diski diski kọmputa ... Ọtụtụ mgbe, ndị ọjọọ (ndị a na-akpọ ihe ọjọọ na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe bụ ihe kpatara ọdịda diski, i nwere ike ịgụkwu banyere ha ebe a). Maka ọgwụgwọ nke ndị dị otú ahụ, e nwere ụlọ ọrụ na mmemme pụrụ iche.
Esi zoo faịlụ na nchekwa? Encryption disk
Eleghi anya, onye ọ bụla n'ime anyị nwere folda na faịlụ anyị ga-achọ zoo site na ihicha anya. Karịsịa mgbe ọ bụghị naanị gị, kamakwa ndị ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ na kọmputa ahụ. Iji mee nke a, ị nwere ike, n'ezie, tinye paswọọdụ na folda ma ọ bụ debe ya na paswọọdụ. Mana usoro a anaghị adị mfe mgbe niile, karịsịa maka faịlụ ndị ị ga-arụ ọrụ.
Mkpebi nke diski ike (HDD) site na ụda
Ezi ụbọchị. Ná mmalite nke isiokwu ahụ, naanị m chọrọ ikwu na disk diski bụ ngwaọrụ ngwaọrụ na ọbụlagodi 100% disk na-enweghị ike ịmepụta ụda n'ọrụ ya (otu ntụgharị ụda mgbe ị na-etinye isi magnet). Ee na ị nwere ụda yiri nke ahụ (karịsịa ma ọ bụrụ na diski dị ọhụrụ) nwere ike ọ gaghị ekwu ihe ọ bụla, ihe ọzọ bụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye ọ bụla, ma ugbu a ha apụtawo.
Kedu esi eweghachi akụkụ nke disk diski na-abụghị nke dị na Windows 7/8?
Ndewo Ugboro ugboro, mgbe ị na-etinye Windows, karịsịa ndị ọrụ na-enweghị ọrụ, na-eme ntakịrị ndudue - ha na-egosi "akụkụ" nke diski diski ike. N'ihi ya, mgbe oge ụfọdụ, usoro diski C na-aghọ obere ma ọ bụ diski mpaghara. Iji gbanwee ogo nke diski diski diski, ịkwesịrị: - reinstall Windows ọzọ (n'ezie na nhazi na nkwụsị nke ntọala niile na ozi, mana usoro ahụ dị mfe na ngwa ngwa); - ma ọ bụ wụnye ihe omume pụrụ iche maka ịrụ ọrụ na diski ike ma rụọ ọtụtụ arụmọrụ dị mfe (na nhọrọ a, ị gaghị efunahụ ozi ahụ, ma ogologo oge).
Otu esi jikọọ diski ike site na laptọọpụ na kọmputa
Ezi ụbọchị! Echere m, onye na-arụ ọrụ na laptọọpụ, mgbe ụfọdụ ọ na - enweta ọnọdụ yiri nke ahụ: ịkwesịrị idetu ọtụtụ faịlụ site na laptọọpụ disk diski na diski ike nke kọmputa desktọọpụ. Esi mee nke a? Nhọrọ 1. Na jikọọ laptọọpụ na kọmputa na netwọk mpaghara ma nyefee faịlụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọsọ gị na netwọk adịghị elu, mgbe ahụ usoro a na-ewe oge dị ukwuu (karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ idetu ọtụtụ gigabytes).
Kedu ka esi agbanwe akara ngosi nke windo ma ọ bụ diski ike mpụga?
Ezi ụbọchị. Taa, enwere m ntakịrị isiokwu na ichota ọdịdị nke Windows - esi agbanwe akara ngosi mgbe ejikọra USB flash drive (ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ, dị ka diski ike na-apụ apụ) na kọmputa. Gịnị mere nke a ji dị mkpa? Mbụ, ọ mara mma! Nke abuo, mgbe ị nwere ọtụtụ draịvụ na ị gaghị echeta ihe ị nwere - ihe ngosi ma ọ bụ akara ngosi - ị nwere ike ịnweta ngwa ngwa.
Esi nyefee Windows site na HDD ka SSD (ma ọ bụ diski ike ọzọ)
Ezi ehihie Mgbe ị na-azụta diski ike ọhụrụ ma ọ bụ SSD (ike siri ike), ọ bụ mgbe niile ka ị ga-eme: ma ọ bụrụ na ịwụnye Windows site na ncha ma ọ bụ nyefe ya na Windows OS na-agba ọsọ site na ịmepụta ya (ekpuchi) site na draịvụ ochie ahụ. N'isiokwu a, achọrọ m ịtụle ụzọ dị mfe ma dị mfe iji nyefee Windows (dị mkpa maka Windows: 7, 8 na 10) site na kọmpụta ochie ochie na SSD ọhụrụ (na ihe atụ m ga-ebufe usoro sitere na HDD na SSD, ma ụkpụrụ nke ịnyefe ga-abụ otu na HDD -> HDD).
Kedu otu esi achọpụta ụdị ọnọdụ a na-arụ ọrụ: SSD, HDD
Ezi ụbọchị. Oge ọsọ nke ụgbọala na-adabere na ọnọdụ ọ na-arụ ọrụ (dịka ọmụmaatụ, ọdịiche dị na ọsọ nke ụgbọala SSD n'oge a jikọtara ya na SATA 3 ọdụ ụgbọ mmiri megide SATA 2 nwere ike iru ihe dị iche iche nke 1.5-2 ugboro!). N'okwu a dị ntakịrị, Achọrọ m ịgwa gị otu ị ga-esi ngwa ngwa chọpụta ụdị mode a diski diski (HDD) ma ọ bụ ụgbọala siri ike (SSD) na-arụ ọrụ na.
Otu esi chọpụta ọnọdụ diski diski: ogologo oge ọ ga-adịru
Ndewo A na-ebu amụma banyere ịdọ aka ná ntị! Iwu a kachasị mma maka ịrụ ọrụ na draịva siri ike. Ọ bụrụ na ị maara na ọ ga-adaba na draịvụ dị otú ahụ ga-ada, mgbe ahụ, ihe ize ndụ nke ọnwụ data ga-adị ntakịrị. N'ezie, ọ dịghị onye ga-enye 100% nkwa, ma na oke ogo nke puru omume ụfọdụ omume nwere ike ịtụle ihe dị na S.
Esi jikọọ 2 HDDs na SSDs na laptọọpụ (ntuziaka njikọ)
Ezi ụbọchị. Ọtụtụ ndị ọrụ anaghị enwe otu disk maka ọrụ kwa ụbọchị na laptọọpụ. E nwere n'ezie ihe ngwọta dị iche na nke a: ịzụta diski ike mpụga, USB flash drive, na ndị ọzọ na-ebu (anyị agaghị atụle nhọrọ a na isiokwu). Ịnwere ike ịwụnye diski ike abụọ (ma ọ bụ SSD (ọnọdụ siri ike) kama ịpịgharị bọtịnụ.
Nyocha nke ebe ejiri ya na disk diski. Kedu ihe kpatụrụ draịvụ ike, gịnị mere ohere free na-ebelata?
Ezi ehihie Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-ajụ m otu ajụjụ ahụ, ma na nkọwa dịgasị iche iche: "Gịnị ka diski ike na-arụ?", "Gịnị mere ohere diski diski ji dị ntakịrị, ọ bụ na enweghị m ibudata ihe ọ bụla?", "Otu esi achọta faịlụ ndị na-ewe ohere n'elu HDD ? " na ihe ndị ọzọ Maka nyocha na nyocha nke ebe ejiri na diski ike, enwere mmemme pụrụ iche site na nke ị ga - ahụ ngwa ngwa na nhichapụ.
2 draịva na laptọọpụ, kedu? Ọ bụrụ na otu disk na laptọọpụ adịghị ezu ...
Ezi ehihie M ga-agwa gị otu ihe - laptọọpụ, otu ihe ahụ, aghọwo ihe a ma ama karịa PC nkịtị. E nwere ọtụtụ nkọwa maka nke a: ọ na-ewe obere ohere, ọ dị mfe ịnyefee, ihe niile na-ejikọta n'otu oge (na ịchọrọ ịzụta igwefoto weebụ, ndị ọkà okwu, UPS, wdg. Site na PC), na ọnụahịa ha aghọwo ọnụ karịa ọnụahịa.
Ndewo Ndị ọrụ ole na ole dị ugbu a ezutewo njehie ndị metụtara na nkewa disk. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ mgbe mgbe ị wụnye Windows, njehie na - egosi, dịka: "Enweghị ike itinye Windows na diski a. Disk nwere nhọrọ nwere akụkụ GPT." Ọfọn, ma ọ bụ ajụjụ banyere MBR ma ọ bụ GPT na-apụta mgbe ụfọdụ ndị ọrụ zụrụ diski, nke hà karịrị TB 2 (t.
HDD okpomọkụ: nkịtị na egwu. Otu esi belata okpomọkụ nke diski ike
Ezi ehihie A diski ike bụ otu n'ime ngwongwo kachasị ọnụ ahịa ọ bụla na kọmputa na laptọọpụ. Ịtụkwasị obi na faịlụ na nchekwa niile na-adabere na ya pụrụ ịdabere! Maka oge diski diski - ezigbo uru bụ okpomọkụ nke ọ na-ekpuchi n'oge ọrụ. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ijikwa okpomọkụ site n'oge ruo n'oge (karịsịa n'oge okpomọkụ) ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mee ihe iji belata ya.
Kedu ihe mere ị na-eji kpoo diski ike mpụga? Ihe ị ga-eme
Ndewo Ka ọ dị ugbu a, nyefe fim, egwuregwu na faịlụ ndị ọzọ. Ọtụtụ ihe dị mfe na draịvụ ike mpụga karịa na draịvụl ma ọ bụ DVD diski. Mbụ, ọsọ ọsọ ahụ na HDD mpụga dị elu (site na 30-40 MB / s megide 10 MB / s na DVD). Nke abuo, ọ ga-ekwe omume ịdekọ na ihichapu ozi na diski ike dịka ọchọrọ ma mee ya ngwa ngwa karịa otu DVD diski.
Otu esi ehichapu diski diski PC (HDD) na iwelie oghere ohere na ya ?!
Ezi ụbọchị. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe karịrị 1 TB (karịa 1000 GB) - enweghi ohere zuru oke na HDD ... Ọfọn, ọ bụrụ na diski nwere naanị faịlụ ndị ị maara banyere, ma mgbe mgbe faịlụ ndị dị na draịvụ ike nke "zoro ezo" site na anya. Ọ bụrụ na site n'oge ruo n'oge iji kpochapụ diski site na faịlụ ndị dị otú ahụ - ha na-akwakọba ọnụ ọgụgụ buru oke ibu na ohere "ewepụ" na HDD nwere ike gbakọọ na gigabytes!